HP Pavilion 20-2222x (i3) (AIO) ~ The ICT.com.mm Blog
မြန်မာပြည်၏ တရားဝင်ဖြန့်ချီခွင့် ရရှိထားသော Royal Smart Co., Ltd. အနေဖြင့် အသစ်အသစ်သော နည်းပညာများဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော HP Products အသစ်များနှင့် မိတ်ဆက်ပေးနေကျဖြစ်ပြီး ယခုတစ်ဖန် HP ရဲ့ Commercial Series တစ်မျိုးဖြစ်သော HP Pavilion 20-2222XAll In One PC ဖြင့် ထပ်မံမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ။ နေရာယူမှု သက်သာပြီး Widescreen ကြိုက်သူများအတွက် 19.45” inch အရွယ်အစားရှိ IPS နည်းပညာဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော Display အမျိုးအစားပါ IPS နည်းပညာကို အသုံးပြုထားတဲ့အတွက် ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ ရုပ်ထွက်ကို ပေးစွမ်းနိုင်မည့်အပြင် Frameless ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျယ်ဝန်းတဲ့ မျက်နှာပြင်ကိုပါ ထိတွေ့အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။
ဒါ့အပြင် Display ကိုလည်းလိုအပ်သလို ခေါက်ချိုးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။ Intel ရဲ့ Processor အုပ်စုများထဲကမှ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Intel Core (i3) 4150T (3.0 GHz) ကို အသုံးပြုထားပြီး လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအတွက် အချိန်ကုန်သက်သာ မြန်ဆန်စေမည့် 500GB SATA SSHD ပါဝင်ပါသည်။ အသံပိုင်းဆိုင်ရာ အတွက်လည်း ကြည်လင်ပြတ်သားပြီး ခံစားမှုရသလို အပြည့်အ ဝပေးစွမ်းနိုင်မည့် dts studio sound system ပါဝင်တဲ့အတွက် လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ သောတအာရုံကိုဖမ်းစားနိုင်မှာအမှန်ပါပဲ။ ထို့ကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ အိမ်ခန်း၊ ရုံးခန်းနှင့် လုပ်ငန်းခွင် တို့အတွက် ခန့်ညားတင့်တယ်စေပြီး စွမ်းဆောင်ရည်တွေကို အံ့မခန်းထုတ်ဖော် ပြသပေးနိုင်မည့် HP Pavilion 20-2222X (i3) All In One PC ကိုအာမခံသက်တမ်း (၁)နှစ်ဖြင့် မြန်မာပြည်၏ တရားဝင်ဖြန့်ချီခွင့်ရရှိထားသော Royal Smart Co., Ltd. မှတင်သွင်းဖြန့်ချီလိုက်ပါသည်။
HP Pavilion 20-2222x (i3) (AIO)/
Price – 495 USD
4th Gen Intel Core i3 – 4150T (3GHz, 3M L3 Cache, CPU (Haswell), 19.45” LCD High-Definition display, 4GB DDR3-1600 SODIMM RAM, 500GB 7200RPM SATA, Intel HD Graphic 4400. Optical Disk Drive Slim SATA 8x DVD RW, hp 7-in-1 USB Media Card Reader, hp wireless NIC 802.11b/g/n, Web Cam, HP Keyboard & Mouse.
Newer MSI GT80 2QC Titan SLI Gaming (18.4”) Notebook
Older Acer Iconia Tab A1-713